StaVl Zosimov Premudroslovsky, Ogaanshaha Crazy. Baaraha qosol leh – скачать в fb2, epub, rtf, pdf, txt
Ogaanshaha Crazy. Baaraha qosol leh
England waxaa ku sugan dambi baadhe, Sherlock Holmes iyo Dr. Watson; Yurub dhexdeeda – Hercule Poirot iyo Hastings; gudaha Mareykanka, Niro Wolfe iyo Archie Goodwin.Oo halkan, reer Russia, kani waa degmada guud ee loo yaqaan Klop iyo kaaliyihiisa xun, ee dhinaca, Incifalapat.Si wada jir ah uma arki doonaan midba midka kale, laakiin tani kama hor istaagayso baaritaanka kiisaska dambii…Buuggan cusub waxaa jeclay Putin.# Xuquuqda oo dhan waa la keydiyay
StaVl Zosimov Premudroslovsky, Ogaanshaha Crazy. Baaraha qosol leh — скачать в fb2, txt, epub или pdf
Читать «Ogaanshaha Crazy. Baaraha qosol leh» онлайн